निकै रुचाइएका जोडी अनमोल र सुहाना अब एकैसाथ ! – Etajakhabar
निकै रुचाइएका जोडी अनमोल र सुहाना अब एकैसाथ !
काठमाडौँ- अनमोल सुहानाको ‘ए मेरो हजुर ४’ आउने दसैँमा रिलिज हुने पक्का जस्तै भएको छ । निकै रुचाइएका जोडी अनमोल र सुहानाको यस चलचित्र निकै प्रतीक्षित बनेको छ । २०७७ को कार्तिक ७ गते रिलिज हुने पक्का भए पछिअनमोल र सुहानाका फ्यानहरु खुशी भएका छन् ।
फिल्मलाई झरना थापाले नै निर्देशन गर्ने छन् ।सुनिलकुमार थापा प्रोडक्सन र सुहाना इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र नेपाल, ओमान र हल्याण्डमा खिचिने छ । निर्देशक झरनाकी छोरी सुहानाको डेब्यु चलचित्र नै ब्लक बस्टर साबित भएपछि उनलाई रामे सम्भाबना बोकेकी नायिकाको रुपमा हेरिन् थालिएको छ ।
चलचित्र सुपरहिट भएपछि नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापाको जोडी फेरि पनि चलचित्रको पर्दामा आउनुपर्छ भन्ने माग पनि बढ्दो छ । यसैविच, नायक अनमोल केसीले नयाँ चलचित्र कुनमा काम गर्छन् भन्ने चर्चा र अनुमान पनि चलचित्र बजारमा चलिरहेको छ । यसैविच, नायिका झरना थापाको एउटा स्टाटसले भने अझै कौतुहलता बढाइदिएको छ ।
झरनाले केहिबर्षदेखि नै ‘भागवत गीता’ नाममा चलचित्र बनाउने तयारी गरेकी थिइन् । तर, ‘ए मेरो हजुर २’ हिट भएपछि झरनालाई वितरकले नै यसको तेश्रो पाटो बनाउन दबाब दिएका थिए । जसकाकारण, ‘ए मेरो हजुर ३’ बनेको थियो ।
Posted on: Sunday, February 16, 2020 Time: 16:16:43
-18641 second ago
-14518 second ago
-13998 second ago
-7594 second ago
-3312 second ago
-2454 second ago
-961 second ago